Emeneka Agbapeela Mmiri Ọ Gbapuuru Ndị Ụmụeri
Ụbọchị bụ nnọọ sọ ọñụ n'Obodo Ụmụeri dị n'okpuru ọchịchị Anambra East nke steeti Anambra dịka nwa amadi na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo ahụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra bụ maazị Obinna Emeneka gbapeere ndị obodo ahụ mmiri ọhụụ ọ gbapuuru ha, dịka otu n'ime ọrụ ngo ya dịka onye nnọchi anya ha.
Mmemme ịgbape mmiri ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ogbè Irueke Ikenga Ụmụeri ma bụrụkwa nke dọtara imirikiti mmadụ sịtere n'ime na na mpụga obodo ahụ nke gụnyere ndị ọrụ gọọmenti, ndị ichie, ndị ọrụ mgbasa ozi, ndị enyị na ndị na-echere obodo ahụ ezi echiche.
N'okwu ya na mmemme ahụ, nwa amadi ahụ, bụ onye mepụtagoro ọtụtụ ihe dị iche iche n'okpuru ọchịchị ahụ na n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra dịka onye nnọchi anya na onye omebe iwu, toro ụmụafọ obodo ahụ n'ebe ọ dị ukwuu maka ezi nkwàdo ha na-enye ya kemgbe ahọ ole gara aga, ma kọwakwa na ọrụ ngo ahụ gbasoro usoro mmepe ahụ gọvanọ Obianọ malitere na steeti ahụ, bụ nke obodo ga-eji aka ha wee họrọ ihe ha chọrọ ka a rụọrọ ha.
O kwuru na mmiri ahụ bụ nke abụọ ọ gbapugoro n'obodo ahụ, ma kpọpụtasịkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ o mepụtagooro ndị obodo ahụ, nke gụnyere ịkpọta ndị ọrụ ahụike nyochara ha ahụ ma nye ha ọgwụgwọ n'efu, inye ụmụakwụkwọ obodo ahụ ruru iri ise n'ọnụ ọgụgụ ohere agụmakwụkwọ n'efu, tinyere ihe ndị ọzọ.
Na nkọwa ya banyere mmiri ahụ, o mere ka a mara na ndị ọkacha mara dị iche iche enyochaala mmiri ahụ nke ọma, chọpụta na ọ dị mma ọñụñụ, ma kwuokwa na ọrụ ya n'ọgbọ nta nkwado ahụ na-agazu obodo niile dị n'okpuru ọchịchị ahụ, ọ bụna dịka ọ gara n'ihu rịọ nkwado ha, ma dụọ ndị Ụmụeri ka ha chekwaba ma leruo mmiri ahụ anya nke ọma, ya na chara chara igwe ọkụ ọhụụ so ya wee bịa.
N'okwu nke ya, onoowu obodo ahụ bụ Chiifu Mike Ekweọnụ toro nwa amadi ahụ nke ukwuu maka ime ka ihu ọchị na-awa ndị ọgbọ nta nkwado ahụ mgbe ọbụla site n'inọchite anya ha nke ọma na iwelatara ha oke nke ha dịka o siri kwesi, ma kwekwazie ya nkwa na ndị obodo ahụ na ọgbọ nta nkwado ahụ kwụ ya n'azụ, maka na e kwuru na e too onye gburu ewu, ọ hụ ehi o gbuo.
E wezuga egwu otuto na egwu ọñụ dị iche iche ụmụ nwaanyị obodo ahụ gụrụ; ihe pụtakarịchakwara ihe na mmemme ahụ bụ ịgbape mmiri ahụ kwọnkwem, bụ nke e mere site n'aka otu nwa afọ obodo ahụ ma bụrụkwa onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti ahụ n'ihe gbasaara ịrụpụta ọgwụ, bụ maazị Chibuụzọ Ọkaa, bụ onye tokwara maazị Emeneka ma kpee ekpere ka Chineke gọzie ya.